Wasaaradda Caafimaadka Oo Daawooyin Gaadhsiisay Gobolka Sanaag | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Wasaaradda Caafimaadka Oo Daawooyin Gaadhsiisay Gobolka Sanaag
Published on December 28, 2016 by sdwo · No Comments
Ceerigaabo (SDWO.com): Wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta daawooyin kala duwan waxay gaadhsiisay gobolka Sanaag, daawadaasi oo loogu tallo-galay in lagaga hor tago cabsi laga qabo cuduro ka dilaaca degaamadda abaartu ka jirto iyo nafaqo-darri ka taagan meelahaasi.
Waxaana daawooyinkaasi oo isugu jira saddex qaybood oo kala daawadda shuban-biyoodka, nafaqo-daridda iyo daawooyin kale oo ka kooban kuwa loo isticmaalo xanuunadda faafa iyo xanuunadda ka dhasha abaaraha.
Daawooyinkaasi oo uu siday baabuur kuwa xamuulka ah ayaa maanta maamulka gobolka caafimaadka ee gobolka Sanaag ku wareejiyay Agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta ee wasaaradda caafimaadka Iid Xasan Axmed, munaasibad kooban oo lagu qabtay magaaladda Ceerigaabo.
Iyadoo halkaasi ay goob joog ka ahaayeen masuuliyiinta gobolka Sanaag iyo ka degmadda Ceerigaabo, qaar ka mid ah xildhibaanadda golaha degaanka, madaxda caafimaadka ee gobolka Sanaag iyo gudiga taakulaynta abaaraha ee heer gobol.
Iid Xasan Axmed, agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta ee wasaaradda caafimaadka oo isugu daawooyinkani ku wareejiyay isu-duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag oo halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay in daawooyinkan uu soo gaadhsiiyay gobolka Sanaag ay yihiin kuwo loogu tallo-galay dadka abaartu haleeshay ee gobolka.
Iyadoo degaamo ka tirsan gobolka Sanaag ay haatan ka taagan yihiin xaalado nololeed oo adag iyo dhibaatooyin caafimaad darro oo ay bulshadda dhaxalsiisay abaartu.
Iid Xasan Axmed, oo arrimahaasi faah-faahin ka bixinayay-na waxa uu yidhi “Daawooyinkani waxay isugu jiraan saddex qaybood qaybi waa daawadda Shuban-biyoodka lagu daaweeyo (Daria), qaybina waa daawadda nafaqo-daridda (Mal-nutrition), taasi oo loogu tallo-galay caruurta iyo dadka jilicsan, qabta kale-na waxa weeyi daawooyinkii kale ee nooc walba lahaa, saddexdaas qaybood ayay isugu jiraan daawooyinka aanu idiin sidnaa”.
Waxa kale oo uu sheegay in daawooyinkani ay marka hore ku wareejinayaan isu-duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka, kadib-na ay iyagoo koox ah muddo todobaad ah kala hawlayaan degaamadda loo qorsheeyay in daawooyinkaasi la gaadhsiiyo.
“Anagu daawadan marka u horaysa waxaanu ku wareejinaynaa isu-duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka, waxaana lana soo faray in aanu la sii joogno muddo todoba maalmood ah, oo aanu la shaqayno, lana soo samayno kormeeradda ay degaamadda ku soo wareegayaan, oo halka dhibaatadu ay taallo aanu tagno”ayuu yidhi Iid Xasan Axmed.
Geesta kale isu-duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag Dr. Axmed Maxamed Jaamac, oo daawooyinkaasi kala wareegay agaasimaha maamulka iyo lacagta ee isla wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in daawooyinkan la soo gaadhsiiyay ay ka danbaysay baaq qaylo-dhaan ah oo ay hore ugu dirsadeen wasaaradda caafimaadka.
Dr. Axmed Maxamed Jaamac, waxa uu tilmaamay in maamulka caafimaadka ee gobolka Sanaag ay baahi weyn u qabeen helitaanka daawadani, isla markaana uu aad ugu faraxsan yahay in daawooyinkaasi la soo gaadhsiiyo.
Waxaanu yidhi “Aad iyo aad ayaanu ugu faraxsanahay in daawadani ay na soo gaadho, waayo? Hore waxaanu u samaynay baaq qaylo-dhaan ah oo aanu ku dalbanayno in daawooyin nalala soo gaadho gobolka Sanaag, wasaaradayadu-na si deg deg ah ayay noogu soo jawaabtay”.
Dhinaca kale madaxda heer gobol ee Sanaag, ka degmadda Ceerigaabo iyo waxgaradka ayaa si aad ah u soo dhaweeyay daawooyinkan ay wasaaradda caafimaadku soo gaadhsiisay gobolka Sanaag, waxaanay tilmaameen sida ay wakhtigan bulshadda gobolkaasi ugu baahan yihiin in daawooyin ay helaan.
Waxaanay xukuumadda Somaliland gaar ahaana wasaaradda caafimaadka uga mahad celiyeen daawooyinkan kala duwan ee ay soo gaadhsiisay.